Anovo, ireo masinina ao anaty metro izay hanamboatra ny finday smartphone | Vaovao momba ny gadget
Amin'izao fotoana izao, ny serivisy aorian'ny varotra an'ny finday avo lenta dia zavatra ankafizin'ny mpampiasa indrindra, raha sendra misy lesoka na tsy fahombiazana ao amin'ilay fitaovana dia tsy avelantsika milanja taratasy mahafinaritra isika. Raha ny tena izy, matetika ny orinasa no mirehareha amin'ireo serivisy ireo ary rehefa nivarotra anay ny finday avo lenta izy ireo dia tokony hatoky izahay fa miasa izy ireo. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy misy ny olana rehefa voasaron'ny fiantohana avy amin'ny mpanamboatra isika, saingy inona no mitranga rehefa lany izany isika? Eny, miaraka amin'ilay Anovo vaovao, ny mpampiasa dia manana safidy iray hafa hanamboarana ny fitaovany.
Amin'ity tranga ity, ny milina Anovo, miaraka amin'ny orinasa Israeli Cellomat, dia hapetraka amin'ny gara metro ao an-tanànan'i Barcelona -Plaza Catalunya sy Universitat de Barcelona mandritra ny volana aprily- ary manantena izy ireo fa ity dingana fanamboarana ity dia mora kokoa sy haingana ho an'ny mpampiasa. Na izany na tsy izany dia ho diso ireo fitaovana ireo azo alaina ao anaty 72 ora farafahakeliny.
Ahoana ny fiasan'ireto Anovo ireto
Tena tsotra ny asany. Tonga eo alohan'ny masinina isika ary tsy maintsy mampiditra ny maodelin'ilay finday avo lenta izay te-hamboarina ary rehefa vita izany dia mila manoratra ireo olan'ny fitaovana ao anaty masinina isika. Amin'izao fotoana izao dia hikajian'ny masinina ny vidin'ny fanamboarana mifototra amin'ny maodely sy lesoka, raha afa-po isika dia mila miditra amin'ny smartphone fotsiny ary manangona ny tapakila miaraka amin'ny kaody fanaraha-maso ny fizotrany, ho fanampin'ny SMS ary hisy mailaka nalefa. Ao anatin'ny 72 ora dia ho vitantsika ny manangona ireo fitaovana namboarina tamin'ny masinina iray ihany ary ho amin'io fotoana io rehefa tsy maintsy mandoa ny fanamboarana isika.
Etsy ankilany ary raha tiantsika izany dia hanana ny safidintsika isika Mitondrà fitaovana mpampindram-bola anay eo am-panamboarana ny anay. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny mamela petra-bola 100 euro izay haverina amintsika rehefa miverina ny smartphone ary ny totalin'ny vidiny dia 10 euro.
Ny fitaovana aza dia azo amboarina na dia misy garantie aza ary ilay Orinasa Anovo nahavita niara-niasa tamin'ny orinasa lehibe maromaro hanamboarana ireo fitaovana izay manan-kery ny fiantohany. Amin'ny ankapobeny dia miatrika serivisy iray indray izahay hanome aina ny fitaovanay taloha raha tsy miala amin'ny teti-bola izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Anovo, ireo masinina ao anaty metro izay hanamboatra ny finday smartphone
Facebook dia hanolotra motera fikarohana GIF ao anaty hevitra